Ahụmịhe ndị ahịa dara ada na-ebibi ahịa gị | Martech Zone
SDL mere nnyocha iji chọpụta ebe otu ma ọ bụ isi ihe ama ama ahụmịhe ndị ahịa (CX) ọdịda na ihe ịga nke ọma eme na ndị ahịa na mmetụta na azụmaahịa a.
Ikekwe nsonaazụ kachasị nke nyocha a bụ na SDL chọpụtara na ọtụtụ ndị ọrụ tara ahụhụ site na ahụmịhe ndị ahịa na-adịghị mma ifịk ifịk gbalịa disparage ụlọ ọrụ ohere ọ bụla ha nwere ike site n'okwu ọnụ na nke ahụ gụnyere mgbasa ozi mmekọrịta yana ọwa ntanetị ndị ọzọ n'ịntanetị.
Yikes… na a ejikọrọ ụwa, ahịa ahụmahụ ọdịda na-impacting gị ahịa mgbalị. Akụkọ ọjọọ na-eme ọsọ ọsọ na ihe ndị a nwere ike ikpuchi ezi usoro ọ bụla ị na-etinye n'ịntanetị.
Ihe nchoputa di na infographic gunyere
Ọdịmma CX jọgburu onwe ya chọrọ ihe na-erughị oge elekere ma na-eri ihe na-erughị nri ehihie ka ịnyagharịa.
Ma ọ bụ nkwado ma ọ bụ na ọ bụghị, mmadụ anọ n'ime ụta ụta na-ebo ndị mmadụ ụta maka ọdịda CX.
21% nke isi ọdịda CX na-eme tupu onye ahịa abịa azụ.
27% nke puku afọ iri agaghị anwa idozi ọdịda ahụ, ma e jiri ya tụnyere 13% nke ụmụ ọhụrụ.
Ihe karịrị 40% nke ndị ahịa ' ahụmahụ CX kacha njọ emeela na ụlọ ọrụ dijitalụ (ntụgharị nkwukọrịta, kọmputa na ụlọ ahịa n'ịntanetị).
Ya mere na nke ahụ mara mma ịtụnanya. Ndị ọzọ okwu, ọtụtụ CX ọdịda enwere ike ịchọpụta na ụlọ ọrụ na-egbochi ngwa ngwa tupu ha erute onye ahịa, enwere ike idozi ya yana obere mbọ, ọtụtụ ndị ahịa ga-ahapụ ụlọ ọrụ ahụ kpamkpam - na teknụzụ na-abụkarị isi nke ahụmịhe ndị ahịa na-adịghị mma.
Tags: ahụmahụ ahịaahịa ahụmahụ ọdịdaahịa ahụmahụ mmetụtaahịa ahụmahụ mmadụ mgbasa ozicxọdịda cxmmetụta cxcx mgbasa ozisdlnyocha nyocha ndị ahịa sdlsdl cx nyochannyocha e mere